Koox Premier League Ah Oo Ugu Cad-Cad Saxiixa Matthijs de Ligt – Wararka Ciyaaraha Maanta
Koox Premier League Ah Oo Ugu Cad-Cad Saxiixa Matthijs de Ligt
May 15, 2019 kooxda Premier League, Wararka Maanta 2
Daafaca kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt ayaa ah xiddig si aad ah loo doonayo iyada oo ay kooxo badan oo reer yurub ah doonayaan adeega kabtanka kooxda Ajax.
19 jirka reer Holland ayaa door muhiim ah ka ciyaaray qaab ciyaareedkii cajiibka ahaa ee ay kooxda Ajax soo bandhigtay tartanka champions League xilli ciyaareedkan kuwaas oo gaadhay Semi-finalka champions League.
Kooxda Barcelona ayaa la rumaysan yahay in ay ugu cad-cadahay saxiixa xiddiga reer Holland ee Matthijs de Ligt iyaga oo xiriir la sameeyay wakiilka xiddiga ee Mino Raiola.
Wargayska Mundo Deportivo ayaa sheegaya in uu xiddigu la fadhiisan doono wakiilkiisa si uu ugala hadlo qorshihiisa ka hor inta uuna go,aansan kooxdiisa cusub.
Inkasta oo ay Barcelona ugu cad-cadahay saxiixa xiddiga hadana wargayska ayaa sheegaya in ay jiraan 4 kooxood oo ugu cad-cad saxiixa xiddiga reer Holland, Kooxahaas ayaa kala ah Juventus , Paris, Saint-Germain, Bayern Munich & Manchester City.
Tababare Pep Guardiola ayaa la sheegayaa in uu wax walba u samayn doono sidii uu u heli lahaa daafaca oo uu doonayo in uu ku buuxiyo booska Vincent Kompany & Nicolas Otamendi.
War maalinba wax hayzka so qorina dee ileen dad baa idinku xidhane
Mar barcelona ugu cad cad baad ledihiin marna afar kooxod oo kale
Wixi aad hubtaan nozo tabiya nio
been ma akhrizan karno anagu
Waanyabanahaye waamaxay beenta mesha kasocoto karna Barcelona ayaa ugu cadcad nadhaha marna man city war ninyahow dad wawayn ayad tihine xishoda oo hadad wax sogalinaysan wax run udhow sogaliya kolba shey aan jirin ayad mesha kusoqortane messi ayaa qadaya championship aaway warninyahow beenta kadhafa dadka nigu xidhan